United Kingdom, Essex, Colchester, Co2 7ex
Ikhowudi yeposi: Co2 7ex
Iimbonakalo: Kumgangatho ongaphantsi komgangatho wegadi
Isishwankathelo ** hambisa kule nyanga ** indlu iboniswe ngokufanelekileyo-Ukuhamba umgama ukuya kumbindi wedolophu kunye nesikhululo sikaloliwe sedolophu. Isakhiwo sinika indawo yokuhlala eyaneleyo kunye nekhitshi langoku kunye negumbi lokuhlambela ngeeshawari yokuhlamba. Ayinikezelwanga kwaye ayifumaneki ngoku! Inkcazo uWilliam H Brown uyonwabile ngokubonelela ngale ndawo ifumaneka kule ndawo. Isakhiwo sinika ikhitshi langoku kunye negumbi lokuhlambela kunye nendawo yokuhlala ephangaleleyo. Ipropathi inikezelwa ukuba ihlawulwe kwaye iyafumaneka ixesha elide! Nangona yonke imizamo efanelekileyo isenziwa ukuqinisekisa ukuchaneka kwenkcazo kunye nomxholo, kufuneka sikwazise kolu khokelo okanye ukusikelwa umda. (1) Imigaqo yokuhambisa imali-abaqeshi oza kubakho baya kucelwa ukuba bavelise amaxwebhu achongiweyo ngexesha lenkqubo yokumakisha kwaye siya kucela intsebenziswano yenu ukuze kungabikho kulibaziseka ekuvumeni ilungelo lokuhlala. (2) Ezi nkcukacha aziyonxalenye yazo zonke izithembiso okanye isivumelwano. (3) Isicatshulwa, iifoto kunye nezicwangciso zezikhokelo kuphela kwaye aziyomfuneko ngokupheleleyo. (4) Imilinganiselo: Obu bukhulu begumbi eliqikelelweyo bucwangciswa kuphela njengesikhokelo ngokubanzi. Kuya kufuneka uqinisekise ngobungakanani bayo ukuze wanelise ukuchaneka kwazo. (5) Kuya kufuneka wenze eyakho imibuzo malunga nepropati, ngakumbi malunga nempahla ekufuneka ibandakanyiwe / ingabandakanywa kwaye zeziphi izibonelelo zokupaka. (6) Phambi kokuba ungene kulo naliphi na ilungelo lokuqesha kwisakhiwo esinye sezinto ezipapashiweyo, imeko nemixholo yepropati iya kuchazwa kwisivumelwano sokuhlala kunye ne-inventri. Nceda uqiniseke ukuba ufunda ngononophelo kwaye uyavumelana nesivumelwano sokuhlala kunye nayiphi na i-inventri enikezwe ngaphambi kokutyikitya la maxwebhu.
Nxibelelana nentengiso I-0120668xxxx
, Co2 7ex
Izikolo ezikufutshane neCo2 7ex